(Redirected from Huranda)
Muranda (Slave in English) munhu anoonekwa nekubatwa senhumbi kana chimwe chinhu chinotengwa; uye munhu anomanikidzwa kushanda pasina muripo waanopiwa. Munhu ari muhuranda: anomanikidzwa kugara panzvimbo paasiri kuda; anomanikidzwa kubata mabasa asingade; anoshanda asina muripo; anomanikidzwa kuroora kana kuroorwa; anokwanisa kumanikidzwa kushanda mumawuto achiri mudiki.
Huranda hune nhoorondo huru inozivikanwa kunyanya ndiwo Huranda hwekuyambutswa Atlantic hwakatapa vanhu vatema vazhinji kubva kuAfrica vachiendeswa kuAmerica neEurope. Uhwu huranda kunodanwa muEnglish kunzi "Trans-Atlantic Slave Trade" nokuti vatapwa vaiyambutswa gungwa reAtlantic vachiendeswa kumhiri kwaro kuAmerica neEurope.
Retrieved from "http://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Muranda&oldid=31872"	Category: Tsika	Navigation menu
This page was last modified on 7 Kurume 2013, at 21:33.